I-China i-400-600 inyibilikisiwe umatshini wokwenza ilaphu umatshini kunye nabathengisi | Hongli
Inaliti ethe ngqo ethembekileyo kunye nokubuyisela imigca yemveliso ye-meltblown kubathengi ngokubalula ukusukela kuma-400mm-1600mm. Umgca wokuvelisa odala ungasetyenziselwa ukwenza imveliso ye-meltblown kuphela, kodwa nakwimveliso yezixhobo zokucoca ulwelo nezixhobo zokucoca umoya. Izixhobo zokucoca ulwelo zisetyenziswa ubukhulu becala kwimihlaba yonyango lwamanzi, ipetroli kunye necandelo lemichiza, ngesakhiwo esifanayo, ukuchaneka kokucoca okugcweleyo, isiphumo esibonakalayo, kunye nobuninzi bokubamba ungcoliseko olunamandla kunye nobomi benkonzo ende. Izixhobo zokucoca umoya zisetyenziswa kakhulu kwiinkqubo zokucocwa komoya, kubandakanya kodwa kungaphelelanga apho kucocwa umoya wangaphakathi, ukufotwa komoya weemoto, njl njl.
Umgaqo weteknoloji wesinyibiliko sokunyibilikisa
Melt-blown inkqubo engeyiyo eyolukiweyo kukusebenzisa isantya somoya eshushu ukutsala umsinga omncinci we-polymer unyibilikiko ovela kwimngxunya yespinneret yentloko yokufa, apho kuye kwenziwa khona imicu ye-ultrafine kwaye ihluthwe kwiscreen se-screen okanye i-roller, emva koko -ngalukwanga ngokuzibophelela ngokwakho.
Umtya ophela wokunyibilikisa umaleko womatshini oqulethe isikere esongeziweyo, impompo yegiya, imibhobho enyibilikayo, intloko yokufa enyibilikayo, iheather yomoya, isixhobo sokugungxula, enye ifumana umnatha, isihluzo, iseti ye-electrostatic electret kunye iseti yomatshini otshayo ngokuzenzekelayo kunye nomatshini wokubuyela umva. Phakathi kwala malungu, eyona ibalulekileyo yintloko yokufa okunyibilikayo.
Inkqubo yokuhanjiswa kwepolymer inyibilika. Le nkqubo iqinisekisa ukuba inyibilikisi inyibilika ngendlela efanayo kumaleko onyibilikayo kwaye inexesha lokugcina elinganayo, ukuze kuqinisekiswe ukuba inyibilikisi engagungqi inepropathi engalinganiyo kububanzi bonke. Okwangoku, inkqubo yokuhambisa i-polymer encibilikayo isetyenziswa ikakhulu kwinkqubo yokutshiza. Ngenxa yokuba inkqubo yokuhanjiswa kohlobo lwe-T ayinako ukuhambisa amanzi. Kwaye ukufana kwento yokunyibilikiswa inxulumene ngokusondeleyo nentloko yokufa okunyibilikayo. Ngokubanzi, ukuchaneka koomatshini bokunyibilika kufile kuphezulu, ke ukufa kuyabiza ukwenza. Ngokubhekisele kwihektareya yomoya, umgca wokwenza umaleko wentsimbi encibilikayo ufuna umoya omninzi oshushu. Iziphumo ezikhutshwayo zomoya ezivela kwi-compressor yomoya zidluliselwa kwi-heater yomoya ngenxa yokufudumeza emva kokucoca ubumanzi, emva koko kwindibano yesikhunta yokunyibilika. I-heater yomoya yinqanawa yoxinzelelo, kwaye ngaxeshanye ukumelana nokukhupha umoya oshushu obushushu, ngoko ke impahla kufuneka yenziwe ngentsimbi.
Ukubuyisela umgca kwimodeli yokubonisa
Umda wokwenza umaleko wengubo eyi-400-1200mm ehlengahlengisiweyo
I-Prototype yomgca wokuvelisa inaliti ngqo yomnatha:
Umda we-400-600mm yentsimbi etyibilikisiweyo yomgangatho wentengiso
Umbono owandisiweyo wokujikeleza ukufa
* Lo mgca wokuvelisa uquka iskreyi esinye sokususa, ukunyibilikiswa komkhenkce wangaphandle, ibhanti yokuhambisa, umatshini wokuhambisa umoya ... njl.
* Igcwele ngokuzenzekelayo ukusuka ekutyeni ngezinto ezibonakalayo ukuya ekuqengqelweni kwelaphu lokucheba lokugqibela, itekhnoloji evuthiweyo, ukusebenza okuzinzileyo, iPFE inokufikelela kuma-90 nangaphezulu.
* Umthamo wokuvelisa ukusuka kwi-200kg ~ 300kg, owona mveliso ngqo uxhomekeke kumatshini ongezelelweyo kwaye unyibilikisiwe ubungakanani bokubumba.
Uhlobo loPhuculo: Uhlobo olugqibeleleyo lokuBethela ezantsi
Izixhobo ezisetyenzisiweyo: I-PP
I-5.Product Ububanzi: 400 ~ 600MM
6.Ukuvezwa kobuchule: 200kg ~ 300kg
7.Umiselwe uMax. Isantya: 25M / umzuzu
Amandla eTotal: ≤50KW
Ubungakanani beMachine (LXWXH): 6X3X2
1.55 Iskreyi Esingu-1 esinye
I-3.Negative Pressure Blower
Isixhobo sangaphambi kobushushu
I-6.400 ~ 600MM Spinneret
I-8.Servo engafuni kunye nokusika isixhobo
Inkonzo emva kokuThengiswa:
1.Installation yeNkxaso yeVidiyo, kunye nonxibelelwano lwevidiyo bukhoma kwimeko yohlengahlengiso inengxaki encinci.
Amacandelo e-Free Sphere: Amanye amacandelo aManzi njengesihlanganisi, isitya sokufudumeza
3.Umatshini wokuchwetheza amanzi: unyaka omnye